I-Dees Villa - i-cottage ezimeleyo. Isilwanyana esinobubele - I-Airbnb
I-Dees Villa - i-cottage ezimeleyo. Isilwanyana esinobubele
Ifama sinombuki zindwendwe onguDenise
Le villa yakhiwe ngenjongo yeGrisi enembono yokutshona kwelanga ukuya kuthi ga kwiSiqithi saseKangaroo ibonelela ngeyona ndawo ifanelekileyo yokubaleka.
Iyure enye emazantsi eAdelaide, ungene kwiSiqithi saseKangaroo kwaye ukufutshane neMcLaren Vale kunye neendawo ezininzi zewayini ezimangalisayo.
Ibekwe kwindawo efihlakeleyo yasezilalini kwindawo yehashe yeehektare ezingama-80. I-Dee's Villa yimizuzu eli-10 yokuqhuba ukuya eNormanville okanye eYankalilla. Sikufutshane neMyponga Beach, Lady Bay kunye neCarrickalinga kwakunye nolwandle oludumileyo lwaseNormanville. Izinja kunye neeponi zamkelekile.
I-Villa izimele kwikhaya lethu, ikwindawo yayo yeehektare ezi-5, akukho nto kumbono wakho ngaphandle kwehashe eliqhelekileyo, iipaddocks kunye nolwandle. Sinekhangaru zabahlali kunye ne-echidna ngamaxesha athile ezindwendwela kunye nobomi beentaka ezininzi. Sibambe imitshato, izikhumbuzo ezininzi, imisitho emininzi ekhethekileyo kunye neendwendwe ezihlala e-Adelaide kwaye siyakuxabisa ukukwazi ukutsibela emotweni, siqhube iyure kwaye sizifumana sikwindawo yethu encinci yezulu, indawo yokubuyela ezilalini yokwenyani kodwa yimizuzu elishumi kuphela. kwiidolophu ezimbini ezincinci ezineevenkile ezinkulu, ii-pubs, iindawo zokutyela kunye nayo yonke enye into onokuyidinga.
SikwiPeninsula entle kakhulu yeFleurieu, iyure nje ukusuka eAdelaide kodwa singqongwe ziinduli eziqengqelekayo kunye nolwandle, indawo ecoceke kakhulu kwaye enoxolo enolwandle oluhle lwesanti emhlophe, iiwineries, iikhosi zegalufa ezintathu, iDeep Creek Conservation Park ukuba uyathanda ukuhamba ematyholweni. , zininzi izinto omawuzenze okanye uzipholele nje .
Iindwendwe zethu zineVilla ngokwazo kodwa ndiku-100m kuphela kwindawo enye ukuba kukho nayiphi na imibuzo, ndifumaneka ngefowuni 24 x 7 kwaye ndinokuba lapho ngemizuzu.